အိမ်မက်ဆိုးတွေကနေ နိုးထပေးကြပါတော့ မြန်မာမိန်းကလေးတွေရယ်.. ရင်နာစရာကောင်းလွန်းလို့ပါ...။ - APANNPYAY
Home / ဘ၀နှင့်အချစ်ကဏ္ဍ / အိမ်မက်ဆိုးတွေကနေ နိုးထပေးကြပါတော့ မြန်မာမိန်းကလေးတွေရယ်.. ရင်နာစရာကောင်းလွန်းလို့ပါ...။
အိမ်မက်ဆိုးတွေကနေ နိုးထပေးကြပါတော့ မြန်မာမိန်းကလေးတွေရယ်.. ရင်နာစရာကောင်းလွန်းလို့ပါ...။
Apann Pyay 8:04 PM ဘ၀နှင့်အချစ်ကဏ္ဍ Edit
ဆိုတဲ့အချက်တွေကို စံထားရွေးချယ်ရမှာပါ ။
ဘာမဟုတ်တဲ့ အရာတွေနဲ့ မဟုတ်တဲ့ ဂုဏ်ပကာသနတွေကို မက်မောမိရင် ရလာဒ်တွေက အလိမ်အညာတွေနဲ့ဘဲ တွေ့ဆုံနေကြရပါလိမ့်မယ် ။ စင်ကာပူမှာ ရှိရှိ အင်္ဂလန်မှာ ရှိရှိ ဒါတွေက အရေးမကြီးပါဘူး ။ အပေါ်က အချက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီမှုရှိဖို့ ပိုအရေးကြီးပါတယ် ။ နိုင်ငံခြားဆိုတိုင်း အထင်မကြီးကြပါနဲ့ မြန်မာမိန်းကလေးတွေရယ်။ မဟုတ်တဲ့ဆိုဒ်မှာ ညီမလေးတို့ မမတို့ vzo ပုံတွေ ပလူပျံနေတာ သက်သေပါဘဲ ။ သေချာဘာမှ မသိတဲ့ ယောကျာင်္းတွေ အပေါ် ချစ်မိသွားလို့ပါဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်လေး တစ်ခုနဲ မိမိတို့ ဘ၀တွေကို နင်းခြေမခံမိကြပါစေနဲ့ကွယ်။ လူုဖြစ်ရတဲ့ ဘ၀လေးမှာ လူဖြစ်ရကျိုးနက်ဖို့ဆိုတာ သိက္ခာရှိအောင်နေတတ်ဖို့ သိပ်အရေးကြီးပါတယ် ။ အွန်လိုင်းပေါ်က စကားတွေဟာ ယုံတမ်းစကားတွေလား အမှန်တမ်းစကားတွေလားဆိုတာကို ဝေဖန်ခွဲခြားနိုင်ခြင်း မပြုနိုင်ခင်မှာ ဘာကိုမှ မရက်ရောတာ အကောင်းဆုံးပါ ။ ဒါဆို မေးစရာရှိတယ် ။ အွန်းလိုင်းချစ်သူတိုင်းကို မယုံရတော့ဘူးလားလို့ ။ မဆိုလိုပါဘူး ။ တကယ်မေတ္တာစစ်နဲ့ ချစ်ပြီး ဘ၀ကို လက်တွဲသွားကြတဲ့ သူတွေ တပုံတပင်ပါဘဲ ။ ဒီလို လက်တွဲသွားတဲ့အထိ ဖြစ်တဲ့နေရာမှာ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ မှန်ကန်ဖို့ ရွေးချယ်တတ်ဖို့တော့ လိုတယ် ။ အွန်လိုင်းမှာ ချစ်သူဖြစ်ပြီး တာနဲ့ ပုံတွေတင်ကြတော့တာလည်း ခေတ်စားလာသလိုဘဲ ။စကား စပ်မိတုန်းလေး ပြောချင်သေးတယ် ။ မိမိချစ်သူကို ချစ်လို့ ကိုယ်ပိုင်တယ်ဆိုတာကို လူသိအောင် လုပ်ပေမယ့် တကယ်တမ်းမယူဖြစ်တဲ့ အခါမှာ နစ်နာသွားတာ ကျွန်မတို့ မိန်းကလေးတွေပါပဲ ။ နောက်တစ်ခု ချစ်သူဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ အကောင့် password တွေကိုတောင်းတတ်ကြတာလည်း မိန်းကလေးတော်တော်များများရဲ့ တူညီတဲ့ အချက်ပါပဲ ။ တောင်းတာကို ကျွန်မ အပြစ်မဆိုပါဘူး ။
လိုအပ်တာထက် ပိုတဲ့ ပိုင်စိုးချင်တဲ့ စိတ်တွေက အချိန်တန်တော့ ကိုယ်ကိုဘဲ ဒုက္ခုပြန်ပေးတတ်တယ်ဆိုတာကို ပြောပြချင်တယ် ။ ဟုတ်ပြီ password ရပြီ။ ဖွင့်ကြည့်မယ် ။ ဒီလောက်ဆို လုံလောက်ပြီလေ ။ ဒီထက်ပိုပြီး သူစာမျက်နှာမှာ ကိုယ်ပုံတွေတင်တယ် ။ သူအနေနဲ့ ကိုယ်ကစကားတွေ ၀င်ပြောတာမျိုးကြတော့ အခွင့်ရေးကို အလွဲသုံးစားလုပ်တာနဲ့ တူပါတယ် ။ တဖက်လူကလည်း ခုစကားပြောနေတာ အကောင့်ပိုင်ရှင် ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကို သိပါတယ် ။ ဒီတော့ တဖြေးဖြေး မိတ်ပျက်စရာတွေ ဖြစ်လာတတ်တယ် ။ အကောင့်ဆိုတာ ကြိုက်သလောက် ထပ်ဖွင့်ရတယ်ဆိုတာကို မေ့မထားစေချင်ဘူး ။ ပေးသိထားတဲ့ အကောင့်ကို လိုအပ်တာထက် ပိုချုပ်ကိုင်လာတဲ့ အခါတွေမှာ အသစ်တွေ ထပ်ဖွင့်သုံးကြတော့တာပါပဲ ။ ဒီတော့ ဘာတွေ လုပ်တယ်ဆိုတာ သိချင်လို့ password တောင်းတယ် ။ နောက်အသစ်ထပ်ဖွင့်သုံးတော့ အလကားဖြစ်နေပြီပေါ့ ။ သူပေးတာကို လိုအပ်တဲ့ အခါလေးပါဘဲ ဖွင
ပြောချင်တဲ့ စိတ်ကို ချုပ်ထိန်းလိုက်ရတာ တစ်ကိုယ်လုံးမှာ ရှိတဲ့ အာရုံကြောတွေ ခေတ္တခဏမျှ တုံ့ဆိုင်းသွားသလားထင်ရပါတယ် ။ အတွေးခေါ်တွေ တဖြေးဖြေး ဆင်းရဲလာတဲ့ မြန်မာမိန်းကလေးတွေ အတွက်ပါ ။ ဘာကိုမှ အလေးနက်မရှိတဲ့ ခပ်ပေါ့ပေါ့လူစားတွေကတော့ သူကို အထင်ကြီးချင်ကြီးနေကြမှာပေါ။ ခေတ်ကာလ မြန်မာမိန်းကလေးတွေရဲ့ အတွေးမှာ အယူဆမှားတွေကို သန့်စင်သွားအောင် ဘယ်အရာနဲ့ ဆေးကြောပေးရမလဲလို့ အခါခါတွေးမိတယ် ။ ရခဲလှတဲ့ လူ့ဘ၀ကြီးမှာ အနှစ်သာရ ရှိစွာနေထိုင်ဖို့ဆိုတာ ဆင်းရဲတော၊ ချမ်းသာတော ၊ တော်တာ ၊ ညံ့တာနဲ့ မဆိုင်ပါ ။ ကျွန်မတို့ တတွေ လူဖြစ်ပြီး လူပီတအောင် နေတတ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ် ။ ကြောက်ရမယ့် အရာကို ကြောက်ကိုကြောက်တတ်ရမယ် ။ ရှက်ရမယ့် အရာကို ရှက်တတ်ရမယ် ။ ထိန်းသိမ်းရမယ့် လူကျင့်ဝတ်တွေကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ရမယ် ။ ဒါမှ လူပီတသူလို့ သတ်မှတ်နိုင်မှာပါ ။ အကျင့် သီလ ဂုဏ်ကျေးဇူးတို့နှင့် ပြည့်စုံသော မိန်းမကောင်းလေးတွေ မိသားစုတိုင်းမှာ ရှိနေပါလျှင် အိမ်သာ၏ ။ သီလသတီ = ကိုယ်ကျင့်သီလနှင့်ပြည့်စုံခြင်း ၊ မေဓ၀ိနီ = အမြော်အမြင် ဆင်ခြင်ဥာဏ် ပညာအလိမ္မာနှင့် ပြည့်စုံခြင်း ဆိုတဲ့ မိန်းမကောင်းကျင့်ဝတ်တရားလေးတွေကို မမေ့မလျော့ နှလုံးသွင်း ဆင်ခြင်နိုင်ကြပါစေ ။
မလေးရှားရောက် မြန်မာတွေရဲ့ လူနေမှု ပုံစံလေးကို ပြောချင်ပါသေးတယ် ။ ဒီနေရာမှာ ခိုင်လေး အကြောင်းလေး နည်းနည်း ပြောပြချင်ပါတယ် ။ ခိုင်လေး မလေးရှားမှာ ခုလက်ရှိနေပါတယ် ။ အမျိုးသားနဲ့ တူတူနေပါတယ် ။ တူတူနေတယ်ဆို မလေးရှားရောက် မြန်မာစတိုင်လို မယူရသေးဘဲ တူတူနေနေတာမျိုး မဟုတ်ပါ ။ တရားဝင်လက်ထပ်ပြီး လိုက်နေခြင်းမျိုးပါ ။ ခိုင်လေး အမျိုးသားရှိလို့သာ လိုက်နေရပေမယ့် မလေးရှားမှာ နေနေတာကို ခိုင်လေးမိဘတွေက လုံးဝ သဘောမကျပါဘူး ။ ခိုင်လေးတို့ အိမ်မှာ လုပ်စရာ အလုပ်တွေ အပြည့်ပါပဲ ။ အိမ်ထောင်ရှင် ယောကျာင်္းတစ်ယောက်ကို အဝေးမှာ ကြာကြာ တစ်ယောက်ထဲ ထားဖို့ မသင့်ဘူးလို့ မှတ်ယူတာမို့ သူနဲ့ တူတူလိုက်နေရခြင်းပါ ။ မလေးရှားရောက်တဲ့အခါ ခိုင်လေး အလုပ်လုပ်မယ်လို့ ပြောပါတယ် ။ အမျိုးသားက ပေးမလုပ်ပါဘူး။ သူများဆီမှာ တစ်ခါမှ အလုပ်အလုပ်ဘူးဘဲ အဆင်ပြေမှာ မဟုတ်ဘူးတဲ့ ။ လုပ်တတ်မှာလည်း မဟုတ်ဘူးဆိုပြီး အိမ်မှာဘဲနေခိုင်းပါတယ် ။ ဒီတော့ တစ်နေ့ တစ်နေ့ အိမ်မှုကိစ္စလေးတွေလုပ် ပြီးတာနဲ့ စာတွေဖတ် သတင်းတွေဖတ် ၊ စာရေး ဒါခိုင်လေး အလုပ်ပါပဲ ။ ခိုင်လေးမှာ အကျင့်တစ်ခုရှိတယ် ။ သိချင်တဲ့ အရာတစ်ခုကို သေချာလေ့လာတတ်တာပါပဲ ။ မလေးရှားကို ရောက်ပြီး မလေးရှားရောက်တဲ့ မြန်မာတွေ အကြောင်းကို လေ့လာဖြစ်တယ် ။ အသေးစိတ်ကို လေ့လာမိပါတယ် ။
တခြားနိုင်ငံတွေကို ရောက်ဖူးပေမယ့် ခုလောက် ကြာကြာမနေဘူးတာမို့ မလေးရှားရောက် မြန်မာတွေ အကြောင်းလောက်တော့ မသိခဲ့ပါဘူး ။ မလေးရှားကို ရောက်နေတဲ့ မြန်မာ ယောကျာင်္းလေးတွေ အကြောင်းကို အရင်ပြောချင်တယ် ။ အိမ်ထောင်ရှိသူတွေ ဖြစ်လင့်ကစား မလေးရှားရောက်တာနဲ့ *အင်ဒိုနီးရှား*မတွေနဲ့ တူတူနေကြတယ် ။ မြန်မာချင်းကြိုက်ကြတယ် ။ ချစ်သူဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ တူတူအိပ်ကြတော့တာပဲ။ ကွဲသွားကြလည်း ဘာမှထူးထွေ မခံစားကြရသလိုဘဲရှင် ။ အတွဲ တစ်တွဲဆို တစ်မြို့ထဲ သားတွေပါ ။ နှစ်ယောက်စလုံး အိမ်ထောင်တွေပါပဲ ။ မလေးရှားကို ရောက်တော့ ဖောက်ပြန်ကြတယ် ။ တူတူနေနေကြတယ် ။ မြန်မာပြည်က မိသားစုတွေကတော့ ဒါတွေကို ပြန်သိမှာ မဟုတ်ပါဘူး ။ သိပ်ကို စိတ်ပျက်စရာကောင်းလှတဲ့ အဖြစ်တွေပေါ့ ။ လူတွေ လူတွေ ဘာလို့ သိရက်နဲ့ မိုက်မဲနေကြတာလဲ။ ဒီမေးခွန်းကို ကျွန်မ ရင်ထဲမှာ အထပ်ထပ်ကို မေးနေမိတယ်။အချစ်ဆိုတာ တစ်ကယ်ကို သိမ်မွေ့နူးညံ့ပြီး တန်ဖိုးရှိပါတဲ့ ခံစားမှုလေးတစ်ခုပါ ။ ဒီခံစားမှုလေးကို လူတွေက မဟုတ်တဲ့ နေရာမှာ အသုံးချနေတာကတော့ လုံးဝကို မဖြစ်သင့်ပါဘူး ။ အိမ်ထောင်ရေးတိုင်းမှာ အတွင်းကျိတ် ပြသနာလေးတွေ ရှိနေတတ်ကြပါတယ်။ ဒီလို ပြသနာတွေ ဖြစ်ကျတဲ့ နေရာမှာ ယောကျာင်္းလေး ကော မိန်းကလေးတွေပါ အေးဆေးစွာ ဖြေရှင်းတဲ့ နည်းလမ်းက အကောင်းဆုံး နဲ့ အဖြစ်သင့်ဆုံးပါပဲ ။ ဒါပေမယ့် ပြသနာတက်ချိန်မှာ ဘယ်သူက အေးအေးဆေးဆေး ဖြေရှင်း နိုင်မှာလဲ လို့ တွေးမိကြပါလိမ့်မယ်။ မှန်ပါတယ် ဒါပေမယ့် အတတ်နိုင်ဆုံးတော့ သွေးအေးအေးထားစေချင်တယ် ။ ဒီနေရာမှာ ဖြစ်တတ်တာလေးတွေကို တင်ပြချင်ပါတယ် ။
ရိုးသွားတတ်တယ် အိမ်ထောင်သက်ကြာလာတာနဲ့ အမျှ ရိုးသွားတယ်လို့ မဟုတ်ပေမယ့် အပြောင်းလဲဆိုတာတော့ ရှိလာတတ်ပါတယ်။လူတစ်ယောက်က နေ့တိုင်း ကြက်သားဟင်းကို စားနေရပေမယ့် တစ်ခါတစ်ရံမှာ ငပိရည်တို့စရာလေးကိုတော့ စားချင်တဲ့စိတ်တွေ ၀င်လာတတ်ကြတယ် ။ အိမ်ရှင်မတွေအနေနဲ့ ကြက်သားဟင်းကို ကြော်တာလေးကတမျိုး၊ ချက်တာလေးကတစ်ဖုံ။သုတ်ပေးတာလေးက တသွယ် စားချင်စဖွယ်ဖြစ်အောင်တော့ ပြောင်းလဲမှုလေးတွေ ရှိပေးသင့်ပါတယ် ။ တခါတရံ စားချင်လာတတ်တဲ့ငပိရည်ဆိုတာ စားမိရင် မျက်နှာမှာ အဖုတွေ ထွက်လာတတ်သလို ၊ ဘ၀မှာလဲ အမည်းစက် အဖုတွေ ထွက်လာတယ်ဆိုတာကိုနားဝင်အောင် နူးညံ့တဲ့ နည်းလမ်းလေးတွေနဲ့ ပြောပြဖြေရှင်းသင့်တယ်။ သစ္စာမဲ့ခြင်းဆိုတာကို တရားဝင်ချိုးဖောက်မိကြခြင်း အိမ်ထောင်တစ်ခုကို ထူထောင်တဲ့ နေရာမှာ မိဘပေးစားလို့ဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်တိုင်ချစ်ခင်စုံမက်လို့ဘဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်လို အကျိုးကြောင်းတရားတွေ ရှိနေပါစေ ကိုယ်ကို တိုင် လက်မှတ်ထိုး ပေးမှ တရားဝင် အကြင်လင်မယားဖြစ်ကြရတဲ့အတွက် ကိုယ်တိုင် စိတ်နဲ့ လက်ထပ်ဖြစ်ကြရတာပါပဲ ။ ညှိုနှိုင်းလို့ ဘယ်လိုမှ ကို မရတော့ဘူး ၊ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်လဲ ကွာရှင်းလိုက် တာက သိက္ခာရှိပါသေးတယ် ။ မပြေလည်တဲ့ အိမ်ထောင်ရေးကို အကြောင်းတွေပြ ဒီဘက်လဲ မရှင်း ၊ ဟိုဘက်မှာလဲ ဇာတ်လမ်းတွေ ရှာနေကြတဲ့ သူတွေတော်တော် များများကို မလေးရှားမှာ တွေ့နေရပါတယ်။ လက်ရှိ အိမ်ထောင်ရေးမပြေလည်မှုမှာ ကိုယ်ဘက်က မှန်ချင်မှန်နေပေမယ့် အိမ်ထောင်ရေးမပြေလည်လို့ပါဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ ဖော်ပြန်တာတော့ သိက္ခာမရှိနိုင်ပါဘူး ။ တရားဝင် ကွာရှင်းပြတ်ဆဲခြင်းမရှိဘဲ ဒီလိုကျူးလွန်မိလိုက်တာဟာ မှန်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ ကိုယ်အမှန်တရားတွေပါ အလကားဖြစ်ကုန်တာပါပဲ ။ ကိုယ် ဂုဏ်သိက္ခာတွေ ၊ ကိုယ်ကျင့်တရားတွေ ပျက်စီးခဲ့ရင် ဘယ်ပညာ ၊ ဘယ်ချမ်းသာမှု ကမှ မကယ်နိုင်ပါဘူး။ အဲဒီလို အခါမျိုးတွေမှာ မှန်ရှေ့မှာ ရှင် ရပ်လိုက်ပါ ။ မှန်ထဲမှာ ပေါ်နေတဲ့ ကိုယ်ပုံရိပ်က ရှင်ကို လက်ညှိုးငေါက်ငေါက်ထိုးပြီး အပြစ်တင်နေသလို ရှင် ခံစားရပါလိမ့်မယ်။ အချိန်မှီနေပါသေးတယ် ရှင် အမြန်ဆုံး သိက္ခာရှိတဲ့ လုပ်ရပ်ကို အမြန်ဆုံး ပြုပြင် ပြောင်းလဲလိုက်ပါ ။
ရှင်ကို ကံတရားက တစ်ကြိမ်တော့ ပြင်ဆင်ခွင့် ပေးပါလိမ့်မယ်။ ဖောက်ပြန်တယ်လို့ နာမည်တပ်ခံရတာကိုက လူတစ်ယောက်လုံးကို ရစရာမရှိအောင် သိမ်ငယ်သွားစေပါတယ် ။ မလေးရှားမှာ ပြောနေတတ်ကြလွန်းလို့ပါ ။ မြန်မာပြည်က မိန်းက ဘယ်လိုမကောင်းတာ ၊ မြန်မာပြည်က ယောကျာင်္းက ဘယ်လို ဆိုးတာ စုံနေတာပါပဲ ။ ဟုတ်ပြီ မကောင်းဘူး ၊ ဘယ်လိုမှ ညှိနှိုင်းမရဘူးဆိုရင် ကွာရှင်းလိုက်ပါ ။ ဒီလို မဟုတ်ဘဲ မကောင်းတာတွေ ဆိုးတာတွေကို အကြောင်းပြပြီး လက်ရှိ အိမ်ထောင်အပေါ် ဖောက်ပြန်နေခြင်းကတော့ ရုပ်ဆိုးလွန်းပါတယ် ။ ဆင်ခြင်နိုင်ကြပါဝေလို့ ဆုတောင်းမိပါတယ် ။ မိန်းကလေးတွေ အနေနဲ့လည်း ပိုက်ဆံလာရှာတာ မှန်ပေမယ့် မှန်ကန်တဲ့ နည်းမှန်လမ်းမှန်တွေနဲ့ဘဲ ရှာစေချင်ပါတယ် ။ ချစ်သူဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ တူတူလိုက်အိပ်နေရမယ်ဆိုတဲ့ အောက်တန်းကျတဲ့ ပုံသေနည်းကြီးကို ကျွန်မတို့ မြန်မာမိန်းကလေးတွေ ထိန်းသိမ်းရမယ့် ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုတာနဲ့ တွန်းလှန်တိုင်ထုတ်ပြစ်ကြရအောင် ။ ခုဆို ယောကျာင်္းတော်တော်များများပြောနေကြတဲ့စကားရှိပါတယ် ။ မြန်မာမတွေလည်း အင်ဒိုမတွေနဲ့ ဘာမှ မထူးတော့ဘူးတဲ့ ။ သိပ်ကို ရင်နာစရာကောင်းပါတယ် ။ မြန်မာပြည်ပြန်သွားတဲ့ လူုတိုင်းလိုလိုက နိုင်ငံခြားကောင်းကြောင်းတွေကိုသာ စီကာပတ်ကာပြောတတ်ကြပေမယ့် ဆိုးကျိူးတွေကို ချန်လှပ်ထားကြတာလဲ လူးသားမပီသ မှုတစ်ခုပါပဲ ။ အသက်ကြီးသူက ငယ်သူကို ထိန်းဖို့မပြောပါနဲ့ ကြီးသူတွေကိုယ်တိုင်ကိုက ထိန်းမနိုင် သိမ်းမနိုင်အောင် ဖြစ်နေကြတာ ယိုသူမရှက် မြင်သူရှက်ဆိုသလိုပါပဲ ။
ကဲ ကျွန်မတို့ ဘယ်လို ထိန်းကြမလဲ လူတစ်ဦးချင်း တစ်ယောက်ချင်းဆီက မိမိတို့ကိုယ်ကို တန်ဖိုးတတ်ခြင်းတွေနဲ့ ထိန်းမယ် ။ မိဘတွေ အနေနဲ့လည်း မိမိတို့ သမီးရတနာလေးတွေကို ငွေမျက်နှာတစ်ခုထဲကို မကြည့်ဘဲ နိုင်ငံခြားကိုလွတ် ငွေရှာခိုင်းခြင်းတွေကို သေချာဆင်ခြင်တွေးတောမယ် ။ တကယ်လိုအပ်တယ် လွတ်ရမယ်ဆိုရင်တောင် မိမိတို့ သားသမီးကို သေချာ လေ့လာပါ ။ မိမိရင်သွေးငယ်ဟာ ကိုယ်ကိုကိုယ် အမှန်တကယ် ထိန်းသိမ်းနိုင်ပြီလားဆိုတာကို လေ့လာပြီးမှသာ လွတ်သင့်ပါတယ် ။ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ မိမိကိုယ်ကို ဂုဏ်သိက္ခာရှိအောင် နေတတ်ခြင်းဘဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီနည်းလမ်းဟာ အကောင်းဆုံးနဲ့ အဖြစ်သင့်ဆုံးပါပဲ ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ပြောချင်တာကတော့ ယဉ်ကျေးတဲ့ ခေတ်တစ်ခေတ်ဖြစ်အောင် ကျွန်မတို့တွေ လက်တွဲညီညီ တည်ဆောက်ကြပါစို့ ။ သှူုဖက် ကိုယ်ဖက်မျှတစွာ စဉ်းစားတတ်ပြီး ကိုယ်ချင်းစာတရားကို လက်ကိုင်ထားတတ်သော ၊ နှမချင်းစာနာစိတ်မွေးမြူတတ်သော အမျိုးကောင်းသားတွေ ပေါ်ပေါက်ပါစေ ။ ဘုရားဂုဏ် ၊ တရားဂုဏ်၊ သံဃာ့ ဂုဏ်တို့ကို အထူးမှတ်ရှူတတ်ကာ မေတ္တာပွားများနိုင်သော အမျိုးကောင်းသမီးများသွာ ပေါ်ပေါက်လာကြပါစေ ။ အိမ်မက်ဆိုးတွေကနေ နိုးထပေးကြပါတော့ မြန်မာမိန်းကလေးတွေရယ်လို့ လှုပ်နှိုးရင်း ဆောင်းပါးလေးကို အဆုံးသတ်လိုက်ရပါတော့တယ် ။
*ဟကေ့ောငျ ငါဆျောကို ငါက စငျကာပူမှာလို့ ပွောထားတာကှ ။ ငါ့ facebook မှာလညျး စငျကာပူလို့ဘဲ ရေးထားတယျ ။ ဖုနျးဆကျနတေဲ့ စငျကာပူက ကောငျမလေးကလညျး လာလညျမယျပွောတယျ ။ လာလညျရငျတော့ အေးဆေးဆေး ဟိုတညျဘဲ သှားတညျးတော့မယျ ။*
ပြံ့လှငျ့လာတဲ့ စကားသံတှကေ ကိုယျနဲ့ မဆိုငျပမေယျ့ နားထဲရောကျလာတာမို့ ကွားနရေတယျ ။ ကွားလိုကျမိတော့ ရငျမောပွနျတယျ ။ လူတှေ ရဲ့ အတှေးချေါ အယူဆတှေ ဘာကွောငျ့ ဒီလောကျထိ ပေါ့တနျ သိမျဖငျြးလာရသလဲ ။ တဈနေ့ တဈနေ့ မကွားခငျြလညျးကွးနရေတယျ ။ မမွငျခငျြလညျး မွငျနရေတဲ့ မွငျကှငျးတှေ ၊ အသံတှကေို မုနျးလာသလိုထိ ရငျထဲမှာ ခံစားလာရတယျဆို ပိုလိုကျတာလို့ ပွောကွမလား မသိဘူးနျော ။ ယနေ့ ခတျေစားလာတဲ့ ခကျြတငျ ခဈြသူတှေ ၊ ဖုနျးခဈြသူတှေ အဖွဈပေါ့ရှငျ ။ facebook မှာရေးထားတဲ့ ကိုယျရေးအခကျြလကျတှကေို ကွညျ့ပွီး သူ့ကိုရေးထားတာတှကေို အဟုတျတှမှေတျနကွေတဲ့ မွနျမာမိနျးကလေးတှေ ။ ပညာတှေ သငျထားတာ အလကားမှ မဟုတျတာဘဲ ။ လလေ့ာပါ ၊ တှေးပါ ၊ ဆငျခွငျပါ လို့ပွောခငျြမိတယျ ။ပွောတိုငျးယုံနရေအောငျ ကြှနျမတို့ကို မိဘမှေးထဲက ဦးနှောကျဆိုတာ ထညျ့ပေးထားတယျ ။ ဒါအလကားထားဖို့မှ မဟုတျတာ ။ ယောကြာင်ျးတဈယောကျကို ရှေးခယျြတဲ့ နရောမှာ သူ့ရောကျနတေဲ့ နိုငျငံတှေ ၊ သူ့ပိုငျဆိုငျမှုတှထေကျ အဓိကထား ရှေးခယျြရမယျ့ အခကျြတှရှေိပါတယျ ။
၁.ယောကြာင်ျးတဈယောကျရဲ့ အရညျခငျြး ၊
၂.မိမိခဈြသူအပျေါ စာနာထောကျထားတတျမှု ၊
၃. မိမိခဈြသူအပျေါ သစ်စာရှိမှု ၊
၄. မိမိအပျေါ ဦးဆောငျ တတမှု ၊
၇.ကြှနျမတို့ ဘဝတှကေို ဘယျလောကျထိ လုံင်ျခွုမှုပေးနိုငျခွငျး
ဆိုတဲ့အခကျြတှကေို စံထားရှေးခယျြရမှာပါ ။
ဘာမဟုတျတဲ့ အရာတှနေဲ့ မဟုတျတဲ့ ဂုဏျပကာသနတှကေို မကျမောမိရငျ ရလာဒျတှကေ အလိမျအညာတှနေဲ့ဘဲ တှဆေုံ့နကွေရပါလိမျ့မယျ ။ စငျကာပူမှာ ရှိရှိ အင်ျဂလနျမှာ ရှိရှိ ဒါတှကေ အရေးမကွီးပါဘူး ။ အပျေါက အခကျြတှနေဲ့ ကိုကျညီမှုရှိဖို့ ပိုအရေးကွီးပါတယျ ။ နိုငျငံခွားဆိုတိုငျး အထငျမကွီးကွပါနဲ့ မွနျမာမိနျးကလေးတှရေယျ။ မဟုတျတဲ့ဆိုဒျမှာ ညီမလေးတို့ မမတို့ vzo ပုံတှေ ပလူပြံနတော သကျသပေါဘဲ ။ သခြောဘာမှ မသိတဲ့ ယောကြာင်ျးတှေ အပျေါ ခဈြမိသှားလို့ပါဆိုတဲ့ အကွောငျးပွခကျြလေး တဈခုနဲ မိမိတို့ ဘဝတှကေို နငျးခွမေခံမိကွပါစနေဲ့ကှယျ။ လူုဖွဈရတဲ့ ဘဝလေးမှာ လူဖွဈရကြိုးနကျဖို့ဆိုတာ သိက်ခာရှိအောငျနတေတျဖို့ သိပျအရေးကွီးပါတယျ ။ အှနျလိုငျးပျေါက စကားတှဟော ယုံတမျးစကားတှလေား အမှနျတမျးစကားတှလေားဆိုတာကို ဝဖေနျခှဲခွားနိုငျခွငျး မပွုနိုငျခငျမှာ ဘာကိုမှ မရကျရောတာ အကောငျးဆုံးပါ ။ ဒါဆို မေးစရာရှိတယျ ။ အှနျးလိုငျးခဈြသူတိုငျးကို မယုံရတော့ဘူးလားလို့ ။ မဆိုလိုပါဘူး ။ တကယျမတ်ေတာစဈနဲ့ ခဈြပွီး ဘဝကို လကျတှဲသှားကွတဲ့ သူတှေ တပုံတပငျပါဘဲ ။ ဒီလို လကျတှဲသှားတဲ့အထိ ဖွဈတဲ့နရောမှာ ဆုံးဖွတျခကျြတှေ မှနျကနျဖို့ ရှေးခယျြတတျဖို့တော့ လိုတယျ ။ အှနျလိုငျးမှာ ခဈြသူဖွဈပွီး တာနဲ့ ပုံတှတေငျကွတော့တာလညျး ခတျေစားလာသလိုဘဲ ။စကား စပျမိတုနျးလေး ပွောခငျြသေးတယျ ။ မိမိခဈြသူကို ခဈြလို့ ကိုယျပိုငျတယျဆိုတာကို လူသိအောငျ လုပျပမေယျ့ တကယျတမျးမယူဖွဈတဲ့ အခါမှာ နဈနာသှားတာ ကြှနျမတို့ မိနျးကလေးတှပေါပဲ ။ နောကျတဈခု ခဈြသူဖွဈပွီဆိုတာနဲ့ အကောငျ့ password တှကေိုတောငျးတတျကွတာလညျး မိနျးကလေးတျောတျောမြားမြားရဲ့ တူညီတဲ့ အခကျြပါပဲ ။ တောငျးတာကို ကြှနျမ အပွဈမဆိုပါဘူး ။
လိုအပျတာထကျ ပိုတဲ့ ပိုငျစိုးခငျြတဲ့ စိတျတှကေ အခြိနျတနျတော့ ကိုယျကိုဘဲ ဒုက်ခုပွနျပေးတတျတယျဆိုတာကို ပွောပွခငျြတယျ ။ ဟုတျပွီ password ရပွီ။ ဖှငျ့ကွညျ့မယျ ။ ဒီလောကျဆို လုံလောကျပွီလေ ။ ဒီထကျပိုပွီး သူစာမကျြနှာမှာ ကိုယျပုံတှတေငျတယျ ။ သူအနနေဲ့ ကိုယျကစကားတှေ ဝငျပွောတာမြိုးကွတော့ အခှငျ့ရေးကို အလှဲသုံးစားလုပျတာနဲ့ တူပါတယျ ။ တဖကျလူကလညျး ခုစကားပွောနတော အကောငျ့ပိုငျရှငျ ဟုတျမဟုတျဆိုတာကို သိပါတယျ ။ ဒီတော့ တဖွေးဖွေး မိတျပကျြစရာတှေ ဖွဈလာတတျတယျ ။ အကောငျ့ဆိုတာ ကွိုကျသလောကျ ထပျဖှငျ့ရတယျဆိုတာကို မမေ့ထားစခေငျြဘူး ။ ပေးသိထားတဲ့ အကောငျ့ကို လိုအပျတာထကျ ပိုခြုပျကိုငျလာတဲ့ အခါတှမှော အသဈတှေ ထပျဖှငျ့သုံးကွတော့တာပါပဲ ။ ဒီတော့ ဘာတှေ လုပျတယျဆိုတာ သိခငျြလို့ password တောငျးတယျ ။ နောကျအသဈထပျဖှငျ့သုံးတော့ အလကားဖွဈနပွေီပေါ့ ။ သူပေးတာကို လိုအပျတဲ့ အခါလေးပါဘဲ ဖှင
ပွောခငျြတဲ့ စိတျကို ခြုပျထိနျးလိုကျရတာ တဈကိုယျလုံးမှာ ရှိတဲ့ အာရုံကွောတှေ ခတ်ေတခဏမြှ တုံ့ဆိုငျးသှားသလားထငျရပါတယျ ။ အတှေးချေါတှေ တဖွေးဖွေး ဆငျးရဲလာတဲ့ မွနျမာမိနျးကလေးတှေ အတှကျပါ ။ ဘာကိုမှ အလေးနကျမရှိတဲ့ ခပျပေါ့ပေါ့လူစားတှကေတော့ သူကို အထငျကွီးခငျြကွီးနကွေမှာပေါ။ ခတျေကာလ မွနျမာမိနျးကလေးတှရေဲ့ အတှေးမှာ အယူဆမှားတှကေို သနျ့စငျသှားအောငျ ဘယျအရာနဲ့ ဆေးကွောပေးရမလဲလို့ အခါခါတှေးမိတယျ ။ ရခဲလှတဲ့ လူ့ဘဝကွီးမှာ အနှဈသာရ ရှိစှာနထေိုငျဖို့ဆိုတာ ဆငျးရဲတော၊ ခမျြးသာတော ၊ တျောတာ ၊ ညံ့တာနဲ့ မဆိုငျပါ ။ ကြှနျမတို့ တတှေ လူဖွဈပွီး လူပီတအောငျ နတေတျဖို့ အရေးကွီးပါတယျ ။ ကွောကျရမယျ့ အရာကို ကွောကျကိုကွောကျတတျရမယျ ။ ရှကျရမယျ့ အရာကို ရှကျတတျရမယျ ။ ထိနျးသိမျးရမယျ့ လူကငျြ့ဝတျတှကေို ထိနျးသိမျးနိုငျရမယျ ။ ဒါမှ လူပီတသူလို့ သတျမှတျနိုငျမှာပါ ။ အကငျြ့ သီလ ဂုဏျကြေးဇူးတို့နှငျ့ ပွညျ့စုံသော မိနျးမကောငျးလေးတှေ မိသားစုတိုငျးမှာ ရှိနပေါလြှငျ အိမျသာ၏ ။ သီလသတီ = ကိုယျကငျြ့သီလနှငျ့ပွညျ့စုံခွငျး ၊ မဓေဝိနီ = အမွျောအမွငျ ဆငျခွငျဉာဏျ ပညာအလိမ်မာနှငျ့ ပွညျ့စုံခွငျး ဆိုတဲ့ မိနျးမကောငျးကငျြ့ဝတျတရားလေးတှကေို မမမေ့လြော့ နှလုံးသှငျး ဆငျခွငျနိုငျကွပါစေ ။
မလေးရှားရောကျ မွနျမာတှရေဲ့ လူနမှေု ပုံစံလေးကို ပွောခငျြပါသေးတယျ ။ ဒီနရောမှာ ခိုငျလေး အကွောငျးလေး နညျးနညျး ပွောပွခငျြပါတယျ ။ ခိုငျလေး မလေးရှားမှာ ခုလကျရှိနပေါတယျ ။ အမြိုးသားနဲ့ တူတူနပေါတယျ ။ တူတူနတေယျဆို မလေးရှားရောကျ မွနျမာစတိုငျလို မယူရသေးဘဲ တူတူနနေတောမြိုး မဟုတျပါ ။ တရားဝငျလကျထပျပွီး လျိုကျနခွေငျးမြိုးပါ ။ ခိုငျလေး အမြိုးသားရှိလို့သာ လိုကျနရေပမေယျ့ မလေးရှားမှာ နနေတောကို ခိုငျလေးမိဘတှကေ လုံးဝ သဘောမကပြါဘူး ။ ခိုငျလေးတို့ အိမျမှာ လုပျစရာ အလုပျတှေ အပွညျ့ပါပဲ ။ အိမျထောငျရှငျ ယောကြာင်ျးတဈယောကျကို အဝေးမှာ ကွာကွာ တဈယောကျထဲ ထားဖို့ မသငျ့ဘူးလို့ မှတျယူတာမို့ သူနဲ့ တူတူလိုကျနရေခွငျးပါ ။ မလေးရှားရောကျတဲ့အခါ ခိုငျလေး အလုပျလုပျမယျလို့ ပွောပါတယျ ။ အမြိုးသားက ပေးမလုပျပါဘူး။ သူမြားဆီမှာ တဈခါမှ အလုပျအလုပျဘူးဘဲ အဆငျပွမှော မဟုတျဘူးတဲ့ ။ လုပျတတျမှာလညျး မဟုတျဘူးဆိုပွီး အိမျမှာဘဲနခေိုငျးပါတယျ ။ ဒီတော့ တဈနေ့ တဈနေ့ အိမျမှုကိစ်စလေးတှလေုပျ ပွီးတာနဲ့ စာတှဖေတျ သတငျးတှဖေတျ ၊ စာရေး ဒါခိုငျလေး အလုပျပါပဲ ။ ခိုငျလေးမှာ အကငျြ့တဈခုရှိတယျ ။ သိခငျြတဲ့ အရာတဈခုကို သခြောလလေ့ာတတျတာပါပဲ ။ မလေးရှားကို ရောကျပွီး မလေးရှားရောကျတဲ့ မွနျမာတှေ အကွောငျးကို လလေ့ာဖွဈတယျ ။ အသေးစိတျကို လလေ့ာမိပါတယျ ။
တခွားနိုငျငံတှကေို ရောကျဖူးပမေယျ့ ခုလောကျ ကွာကွာမနဘေူးတာမို့ မလေးရှားရောကျ မွနျမာတှေ အကွောငျးလောကျတော့ မသိခဲ့ပါဘူး ။ မလေးရှားကို ရောကျနတေဲ့ မွနျမာ ယောကြာင်ျးလေးတှေ အကွောငျးကို အရငျပွောခငျြတယျ ။ အိမျထောငျရှိသူတှေ ဖွဈလငျ့ကစား မလေးရှားရောကျတာနဲ့ *အငျဒိုနီးရှား*မတှနေဲ့ တူတူနကွေတယျ ။ မွနျမာခငျြးကွိုကျကွတယျ ။ ခဈြသူဖွဈပွီဆိုတာနဲ့ တူတူအိပျကွတော့တာပဲ။ ကှဲသှားကွလညျး ဘာမှထူးထှေ မခံစားကွရသလိုဘဲရှငျ ။ အတှဲ တဈတှဲဆို တဈမွို့ထဲ သားတှပေါ ။ နှဈယောကျစလုံး အိမျထောငျတှပေါပဲ ။ မလေးရှားကို ရောကျတော့ ဖောကျပွနျကွတယျ ။ တူတူနနေကွေတယျ ။ မွနျမာပွညျက မိသားစုတှကေတော့ ဒါတှကေို ပွနျသိမှာ မဟုတျပါဘူး ။ သိပျကို စိတျပကျြစရာကောငျးလှတဲ့ အဖွဈတှပေေါ့ ။ လူတှေ လူတှေ ဘာလို့ သိရကျနဲ့ မိုကျမဲနကွေတာလဲ။ ဒီမေးခှနျးကို ကြှနျမ ရငျထဲမှာ အထပျထပျကို မေးနမေိတယျ။အခဈြဆိုတာ တဈကယျကို သိမျမှနေူ့းညံ့ပွီး တနျဖိုးရှိပါတဲ့ ခံစားမှုလေးတဈခုပါ ။ ဒီခံစားမှုလေးကို လူတှကေ မဟုတျတဲ့ နရောမှာ အသုံးခနြတောကတော့ လုံးဝကို မဖွဈသငျ့ပါဘူး ။ အိမျထောငျရေးတိုငျးမှာ အတှငျးကြိတျ ပွသနာလေးတှေ ရှိနတေတျကွပါတယျ။ ဒီလို ပွသနာတှေ ဖွဈကတြဲ့ နရောမှာ ယောကြာင်ျးလေး ကော မိနျးကလေးတှပေါ အေးဆေးစှာ ဖွရှေငျးတဲ့ နညျးလမျးက အကောငျးဆုံး နဲ့ အဖွဈသငျ့ဆုံးပါပဲ ။ ဒါပမေယျ့ ပွသနာတကျခြိနျမှာ ဘယျသူက အေးအေးဆေးဆေး ဖွရှေငျး နိုငျမှာလဲ လို့ တှေးမိကွပါလိမျ့မယျ။ မှနျပါတယျ ဒါပမေယျ့ အတတျနိုငျဆုံးတော့ သှေးအေးအေးထားစခေငျြတယျ ။ ဒီနရောမှာ ဖွဈတတျတာလေးတှကေို တငျပွခငျြပါတယျ ။
ရိုးသှားတတျတယျ အိမျထောငျသကျကွာလာတာနဲ့ အမြှ ရိုးသှားတယျလို့ မဟုတျပမေယျ့ အပွောငျးလဲဆိုတာတော့ ရှိလာတတျပါတယျ။လူတဈယောကျက နတေို့ငျး ကွကျသားဟငျးကို စားနရေပမေယျ့ တဈခါတဈရံမှာ ငပိရညျတို့စရာလေးကိုတော့ စားခငျြတဲ့စိတျတှေ ဝငျလာတတျကွတယျ ။ အိမျရှငျမတှအေနနေဲ့ ကွကျသားဟငျးကို ကွျောတာလေးကတမြိုး၊ ခကျြတာလေးကတဈဖုံ။သုတျပေးတာလေးက တသှယျ စားခငျြစဖှယျဖွဈအောငျတော့ ပွောငျးလဲမှုလေးတှေ ရှိပေးသငျ့ပါတယျ ။ တခါတရံ စားခငျြလာတတျတဲ့ငပိရညျဆိုတာ စားမိရငျ မကျြနှာမှာ အဖုတှေ ထှကျလာတတျသလို ၊ ဘဝမှာလဲ အမညျးစကျ အဖုတှေ ထှကျလာတယျဆိုတာကိုနားဝငျအောငျ နူးညံ့တဲ့ နညျးလမျးလေးတှနေဲ့ ပွောပွဖွရှေငျးသငျ့တယျ။ သစ်စာမဲ့ခွငျးဆိုတာကို တရားဝငျခြိုးဖောကျမိကွခွငျး အိမျထောငျတဈခုကို ထူထောငျတဲ့ နရောမှာ မိဘပေးစားလို့ဘဲ ဖွဈဖွဈ ကိုယျတိုငျခဈြခငျစုံမကျလို့ဘဲ ဖွဈဖွဈ၊ ဘယျလို အကြိုးကွောငျးတရားတှေ ရှိနပေါစေ ကိုယျကို တိုငျ လကျမှတျထိုး ပေးမှ တရားဝငျ အကွငျလငျမယားဖွဈကွရတဲ့အတှကျ ကိုယျတိုငျ စိတျနဲ့ လကျထပျဖွဈကွရတာပါပဲ ။ ညှိုနှိုငျးလို့ ဘယျလိုမှ ကို မရတော့ဘူး ၊ မဖွဈနိုငျဘူးဆိုရငျလဲ ကှာရှငျးလိုကျ တာက သိက်ခာရှိပါသေးတယျ ။ မပွလေညျတဲ့ အိမျထောငျရေးကို အကွောငျးတှပွေ ဒီဘကျလဲ မရှငျး ၊ ဟိုဘကျမှာလဲ ဇာတျလမျးတှေ ရှာနကွေတဲ့ သူတှတေျောတျော မြားမြားကို မလေးရှားမှာ တှနေ့ရေပါတယျ။ လကျရှိ အိမျထောငျရေးမပွလေညျမှုမှာ ကိုယျဘကျက မှနျခငျြမှနျနပေမေယျ့ အိမျထောငျရေးမပွလေညျလို့ပါဆိုတဲ့ အကွောငျးပွခကျြနဲ့ ဖျောပွနျတာတော့ သိက်ခာမရှိနိုငျပါဘူး ။ တရားဝငျ ကှာရှငျးပွတျဆဲခွငျးမရှိဘဲ ဒီလိုကြူးလှနျမိလိုကျတာဟာ မှနျခဲ့တယျဆိုတဲ့ ကိုယျအမှနျတရားတှပေါ အလကားဖွဈကုနျတာပါပဲ ။ ကိုယျ ဂုဏျသိက်ခာတှေ ၊ ကိုယျကငျြ့တရားတှေ ပကျြစီးခဲ့ရငျ ဘယျပညာ ၊ ဘယျခမျြးသာမှု ကမှ မကယျနိုငျပါဘူး။ အဲဒီလို အခါမြိုးတှမှော မှနျရှမှေ့ာ ရှငျ ရပျလိုကျပါ ။ မှနျထဲမှာ ပျေါနတေဲ့ ကိုယျပုံရိပျက ရှငျကို လကျညှိုးငေါကျငေါကျထိုးပွီး အပွဈတငျနသေလို ရှငျ ခံစားရပါလိမျ့မယျ။ အခြိနျမှီနပေါသေးတယျ ရှငျ အမွနျဆုံး သိက်ခာရှိတဲ့ လုပျရပျကို အမွနျဆုံး ပွုပွငျ ပွောငျးလဲလိုကျပါ ။
ရှငျကို ကံတရားက တဈကွိမျတော့ ပွငျဆငျခှငျ့ ပေးပါလိမျ့မယျ။ ဖောကျပွနျတယျလို့ နာမညျတပျခံရတာကိုက လူတဈယောကျလုံးကို ရစရာမရှိအောငျ သိမျငယျသှားစပေါတယျ ။ မလေးရှားမှာ ပွောနတေတျကွလှနျးလို့ပါ ။ မွနျမာပွညျက မိနျးက ဘယျလိုမကောငျးတာ ၊ မွနျမာပွညျက ယောကြာင်ျးက ဘယျလို ဆိုးတာ စုံနတောပါပဲ ။ ဟုတျပွီ မကောငျးဘူး ၊ ဘယျလိုမှ ညှိနှိုငျးမရဘူးဆိုရငျ ကှာရှငျးလိုကျပါ ။ ဒီလို မဟုတျဘဲ မကောငျးတာတှေ ဆိုးတာတှကေို အကွောငျးပွပွီး လကျရှိ အိမျထောငျအပျေါ ဖောကျပွနျနခွေငျးကတော့ ရုပျဆိုးလှနျးပါတယျ ။ ဆငျခွငျနိုငျကွပါဝလေို့ ဆုတောငျးမိပါတယျ ။ မိနျးကလေးတှေ အနနေဲ့လညျး ပိုကျဆံလာရှာတာ မှနျပမေယျ့ မှနျကနျတဲ့ နညျးမှနျလမျးမှနျတှနေဲ့ဘဲ ရှာစခေငျြပါတယျ ။ ခဈြသူဖွဈပွီဆိုတာနဲ့ တူတူလိုကျအိပျနရေမယျဆိုတဲ့ အောကျတနျးကတြဲ့ ပုံသနေညျးကွီးကို ကြှနျမတို့ မွနျမာမိနျးကလေးတှေ ထိနျးသိမျးရမယျ့ ကိုယျကငျြ့တရားဆိုတာနဲ့ တှနျးလှနျတိုငျထုတျပွဈကွရအောငျ ။ ခုဆို ယောကြာင်ျးတျောတျောမြားမြားပွောနကွေတဲ့စကားရှိပါတယျ ။ မွနျမာမတှလေညျး အငျဒိုမတှနေဲ့ ဘာမှ မထူးတော့ဘူးတဲ့ ။ သိပျကို ရငျနာစရာကောငျးပါတယျ ။ မွနျမာပွညျပွနျသှားတဲ့ လူုတိုငျးလိုလိုက နိုငျငံခွားကောငျးကွောငျးတှကေိုသာ စီကာပတျကာပွောတတျကွပမေယျ့ ဆိုးကြိူးတှကေို ခနျြလှပျထားကွတာလဲ လူးသားမပီသ မှုတဈခုပါပဲ ။ အသကျကွီးသူက ငယျသူကို ထိနျးဖို့မပွောပါနဲ့ ကွီးသူတှကေိုယျတိုငျကိုက ထိနျးမနိုငျ သိမျးမနိုငျအောငျ ဖွဈနကွေတာ ယိုသူမရှကျ မွငျသူရှကျဆိုသလိုပါပဲ ။
ကဲ ကြှနျမတို့ ဘယျလို ထိနျးကွမလဲ လူတဈဦးခငျြး တဈယောကျခငျြးဆီက မိမိတို့ကိုယျကို တနျဖိုးတတျခွငျးတှနေဲ့ ထိနျးမယျ ။ မိဘတှေ အနနေဲ့လညျး မိမိတို့ သမီးရတနာလေးတှကေို ငှမေကျြနှာတဈခုထဲကို မကွညျ့ဘဲ နိုငျငံခွားကိုလှတျ ငှရှောခိုငျးခွငျးတှကေို သခြောဆငျခွငျတှေးတောမယျ ။ တကယျလိုအပျတယျ လှတျရမယျဆိုရငျတောငျ မိမိတို့ သားသမီးကို သခြော လလေ့ာပါ ။ မိမိရငျသှေးငယျဟာ ကိုယျကိုကိုယျ အမှနျတကယျ ထိနျးသိမျးနိုငျပွီလားဆိုတာကို လလေ့ာပွီးမှသာ လှတျသငျ့ပါတယျ ။ အကောငျးဆုံးနညျးလမျးကတော့ မိမိကိုယျကို ဂုဏျသိက်ခာရှိအောငျ နတေတျခွငျးဘဲ ဖွဈပါတယျ ။ ဒီနညျးလမျးဟာ အကောငျးဆုံးနဲ့ အဖွဈသငျ့ဆုံးပါပဲ ။ နောကျဆုံးအနနေဲ့ ပွောခငျြတာကတော့ ယဉျကြေးတဲ့ ခတျေတဈခတျေဖွဈအောငျ ကြှနျမတို့တှေ လကျတှဲညီညီ တညျဆောကျကွပါစို့ ။ သှူုဖကျ ကိုယျဖကျမြှတစှာ စဉျးစားတတျပွီး ကိုယျခငျြးစာတရားကို လကျကိုငျထားတတျသော ၊ နှမခငျြးစာနာစိတျမှေးမွူတတျသော အမြိုးကောငျးသားတှေ ပျေါပေါကျပါစေ ။ ဘုရားဂုဏျ ၊ တရားဂုဏျ၊ သံဃာ့ ဂုဏျတို့ကို အထူးမှတျရှူတတျကာ မတ်ေတာပှားမြားနိုငျသော အမြိုးကောငျးသမီးမြားသှာ ပျေါပေါကျလာကွပါစေ ။ အိမျမကျဆိုးတှကေနေ နိုးထပေးကွပါတော့ မွနျမာမိနျးကလေးတှရေယျလို့ လှုပျနှိုးရငျး ဆောငျးပါးလေးကို အဆုံးသတျလိုကျရပါတော့တယျ ။